‘टिके’ हरुलाई कांग्रेस महाधिवेशनमा बन्देज - Janatako News
‘टिके’ हरुलाई कांग्रेस महाधिवेशनमा बन्देज
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘टिके’ हरुलाई पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वि नगराउन माग राखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पौडेलले यसबारे गम्भीर रुपमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कांग्रेसका धेरैजसो भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन हुन सकेको छैन । अधिवेशन भएको वैधानिकता प्राप्त संस्थाका प्रतिनिधिले भने मतदान गर्न पाउने छन् । देउवाले समयमै महाधिवेशन नगराए भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था लथालिंग पारेको आरोप पनि लागेको छ । अधिवेशन गर्ने भनेर तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा आएर हार्ने डर भएपछि देउवाले सहमतिका नाममा पनि महाधिवेशन छल्ने गरेका छन् ।
देउवाले गठन गरेका सबै तदर्थ समितिमा उनले आफ्नै मान्छे भर्ती गरेका छन् । सहमतिकै आधारमा समिति गठन गरेको भने पनि अरु समूह र गुटको भने केही प्रतिनिधिमात्र छन् । कांग्रेसको मुख्य भनिँदै आएको नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) र नेपाल तरुण दलमा पनि देउवाले आफ्नै मान्छेलाई संयोजक बनाएका छन्, उनीहरुको लामो समयदेखि अधिवेशन हुन सकेको छैन । तरुण दललाई पार्टीका चार प्रमुख नेताले एक एकजना बाँडेर चार जनाको मात्र समिति बनाइएको छ त्यसमा पनि आन्तरिक मतभेद हुँदै आएको छ । गत माघमा गठन गरेको नेविसंघले पनि भागवण्डाकै आधारमा पदाधिकारीमात्र पाएको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा ती सबै संस्थाका केही प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउँछन् । देउवा भने उनीहरुको मतबाट पनि आफूलाई जित्न सजिलो हुने दाउमा छन् भने अर्को पक्ष यसबाट नराम्ररी आत्तिएको छ । विधान अनुसार वर्तमान कार्यसमितिको म्याद सकिएको छ, संविधान अनुसार पनि आगामी भदौसम्ममा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसलाई बाध्यता छ ।
ओली र दाहालबीचको झगडामा कसले जित्ला ?
रमेशकुमार बोहोरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा अहिले आन्तरिक कलह बढ्दै गएको छ ।…
पार्टी एकता बचाउन नेकपा युवा नेता पौडेलको मार्मिक सुझाव
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता प्रमोद पौडेलले पार्टी आन्तरिक लडाइमा रुमल्लिएकाले…
खान पाउने र नपाउनेको झगडा हो नेकपाको – यूवा नेता खतिवडा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका यूवा नेता राजन खतिवडाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को झगडा खान…
‘खै कुरा बुझेको ? टेलिसिनेमा आउँदै
काठमाडौ । सामाजिक पारिवारिक हास्य टेलिसिनेमा ‘खै कुरा बुझेको ? डिस होमको रियालिटी टिभीबाट बुधवार…
वाणिज्य महासंघमा उठेका गुप्तालाई अहिलेबाट नै चिन्ने कि ?
काठमाडौं । सुबोध कुमार गुप्ता एक सफल उद्योगपति एवम् व्यवसायी हुन् । उनको जन्म सन्…
मनोरंजन मुख्य समाचार समाचार
KMC-28, Putalisadak, Kathmandu
Copyright © 2020 Janatako News